စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 15/12/2019)
ဥရောပအတွက်အကောင်းဆုံးဆောင်းရာသီပွဲတော်များသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်အအေးရာသီ၏အများဆုံး Make. အဆိုပါပွဲတော်များကနေအရာအားလုံးပါဝင်ပတ်သက်နေ နှင်းလျှောစီးနှင့်စနိုးဘုတ်စီးခြင်း သို့ ဂီတ, ပြဇါတ်, ရေခဲပန်းပု, နှင့်ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်ပွဲတော်စစ်ရေးပြ. အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းဖြစ်ပါသည်5သငျသညျဇန်နဝါရီလအတွင်းဥရောပတစ်လွှားဖြစ်ပျက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အရာကို roundup နှင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလ.
Edinburgh Hogmanay ဖြစ်ပါသည် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးနယူးတစ်နှစ်ပွဲနေ့များထဲကတစ်ခု, အမှန်တကယ်ရိုင်းနှင့် wooly အတွင်းခံအဝတ်အစားအခါသမယ. Hogmanay များအတွက်စကော့တလန်စကားလုံးဖြစ်ပါသည် နှစ်သစ်ကူးအကြိုနေ့ , Edinburgh ရဲ့ Hogmanay ပွဲတော်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်များကိုတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်. သား Hogmanay တဲ့ ၃-နေ့ပွဲတော် အပြည့်အဝဖြစ်ရပ်များ ပါဝင်သောအ torchlight ပန္လြတ္, တိုက်ရိုက်လွှဂီတဖျော်ဖြေပွဲ, မိသားစုဖြစ်ရပ်များ, အကြီးအကျယ်လမ်းပေါ်ပါတီ, ရိုးရာကခုန်, မီးကျည်မီးပန်း, တစ်ဦးနှင့်အတူပြီးဆုံးကြောင်းပင်ဝတ်စုံချီတက်ပွဲ မြစ်အတွင်းအအေးကျဆင်းလာ!
လန်ဒန်ရဲ့ Hyde Park ကဆောင်းရာသီ Wonderland အတွက် Hyde Park ကမှပြန် 2018 ၎င်း၏တောက်ပရေခဲကိတ်ကွင်းနှင့်အတူ, ကြီးမားတဲ့ခရစ္စမတ်စျေးကွက်နဲ့ပျော်စရာ-ထုပ်ပိုးစီး. သငျသညျအစာရှောငျထှကျရောင်းချနိုင်သောအံ့သြဖွယ်စီးပေါ်ထွက်ပျောက်ဆုံးရှောင်ရှားရန်ငွေယူစောစောရောက်လာသေချာအောင်လုပ်ပါ! ဆောင်းရာသီ Wonderland နာမည်ဆိုးရေပန်းစားသည်, ငါတို့သည်လည်းဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲဥရောပ၌အကြှနျုပျတို့၏အကောင်းဆုံးဆောင်းရာသီပွဲတော်များစာရင်းပြုစုနိုင်ဘူး!
၏မှောင်မိုက်ကာလနှင့်ညအထိမီးထွန်း လူဇင်ဘတ်စီးတီး ဖြစ် Winterlights လူဇင်ဘတ်. အားလုံးမိသားစုများအတွက်အများအပြားလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်ဖြစ်ရပ်များ, အဆိုပါ ခရစ္စမတ်စျေးကွက် အခိုငျအမာအကြိုက်ဆုံးရှိနေဆဲ! သငျသညျလက်ဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းများမြျှောလငျ့နိုငျ, အဝတ်, ကစားစရာအရုပ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်သင်တန်း (ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး) များများ အရသာအစားအစာ ကိုယ့်ကိုမြည်းစမ်းခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေ! အစဉ်အလာကနေ “အာလူး Kichelchen” ဝေးလံခရီးစဉ်ကနေပိုပြီးထူးခြားဆန်းပြားအရသာမှ, အဲဒီမှာလူတိုငျးအတှကျတစ်ခုခုဖြစ်ခညျြနှောငျဖြစ်ပါတယ်.
ဥရောပတိုက်တွင်ဆောင်းရာသီပွဲတော်များ၏ဤရွေးတွေ့ကြုံခံစားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရေပြပွဲသွားရောက်ဖြစ်ပါတယ် လှေဖြင့်. တူးမြောင်းခရုဇ်ကုမ္ပဏီများအနုပညာလက်ရာများတစ်လျှောက်တွင်အထူးပဲ့ထိန်း cruises ပူဇော်. အဆိုပါ အမ်စတာဒမ်အလင်းပွဲတော် Cruise နဲ့ ကြာ 75 မိနစ်များ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-festivals-europe%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)